Huawei dice que los teléfonos 5G económicos llegarán el próximo año | Androidsis
IHuawei ithi Iifowuni ezingabizi kakhulu ngeNkxaso ye5G ezayo kunyaka olandelayo
Inethiwekhi yokuqala ye-5G yehlabathi yavela eSouth Korea kwinyanga ephelileyo. Kwiiveki ezimbalwa kamva, inethiwekhi yokuqala ye-5G yaseYurophu yasungulwa eSwitzerland, kunye nee-smartphones ezintathu zokuqala ze-5G kwimakethi yaseYurophu; konke kuyabiza, kunjalo, kuba zizitishi zomsebenzi ophezulu.
Siza kusibona nini isixhobo esifikelelekayo esiphakathi kwinqanaba kunye nenkxaso ye-5G kwintengiso? Ngokwomphathi weHuawei uYang Chaobin, oko kuyakwenzeka ngo-2020. Iifowuni zokuqala phakathi kuluhlu Ixabiso eliphantsi le-5G liya kufumaneka ngasekupheleni konyaka olandelayo.
Ngendlela efanayo ukuba iinethiwekhi ze-4G zisasazeke ngokukhawuleza kunamanethiwekhi e-3G, Uphuhliso olupheleleyo lwe-5G luya kukhawuleza nangaphezu kwenethiwekhi ye-4G. Ukungqina ingxelo yakhe, umphathi weHuawei ukhumbuze wonke umntu ukuba ifowuni yokuqala ye-4G ithathe malunga neminyaka emithathu ukubetha ezishelfini, ngelixa ifowuni yokuqala ye-5G yayidinga unyaka kuphela.
Ukuphela kwe-2020, siza kuqala ukubona izixhobo eziphakathi kwinqanaba lokudityaniswa kwe5G kwaye, ngokutsho kwesigqeba seHuawei, Kwi-2021 kunokubakho izixhobo zokungena kwinqanaba le-5G.
Okwangoku, Ixabiso eliphantsi le-5G ye-smartphone yile Xiaomi Mi Mix 3 5G, Ixabiso lalo li-euro ezingama-599 kwimarike yehlabathi. Kwelinye icala, eyokuqala kunye nokuphela kwefowuni yeHuawei 5G ekhoyo ngoku ukuyithenga yile I-Huawei Mate 20 X 5GIxabiso lentengo kuma-euro angama-800. Le yokugqibela inikwe amandla yi-chipset Kirin 980, edityaniswe nemodem I-Balong 5000 5G ezinokufikelela kwisantya ukuya kuthi ga kwi-6,5 GB / s enkosi kwitekhnoloji ye-mmWave.
Imodeli yesithathu enonxibelelwano lwe5G efumanekayo eYurophu yile Oppo Reno 5G. Oku kusebenzisa i Snapdragon 855 ngemodem yeX50 ebonelela ngoqhagamshelo lwe5G kwisixhobo. Isixhobo sibiza ngaphezulu kwama-euro angama-600 kwinguqulelo yayo enomthamo ongaphezulu we-RAM kunye nendawo yokugcina.
Nangona kunjalo, ukufumana ifowuni ye-5G okwangoku ayisiyiyo eyona ndlela ikrelekrele. Amaxabiso abo asephezulu kakhulu. Ngaphaya koko, iinethiwekhi ze5G zisasebusaneni kwaye zifumaneka kuphela kwinani eliqingqiweyo leendawo kwamanye amazwe. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba ulinde ukufumana enye ngexabiso elingcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei ithi Iifowuni ezingabizi kakhulu ngeNkxaso ye5G ezayo kunyaka olandelayo
Eyona ndlela yokwenza iYouTube isebenze ngescreen ngaphandle kokuba ube ngumsebenzisi weNkulumbuso
I-Galaxy A20e isungulwe ngokusemthethweni eSpain